Webmin: nchịkwa site na ihe nchọgharị weebụ | Site na Linux
Webmin ọ bụ ngwaọrụ nke nhazi usoro nnweta Web ụzọ maka OpenSolaris, GNU / Linux na sistemụ Unix ndị ọzọ. Site na ya ị nwere ike hazie akụkụ dị n'ime nke ọtụtụ sistemụ arụmọrụ, dịka ndị ọrụ, oke ego, ọrụ, faịlụ nhazi, mmechi kọmputa, wdg, yana gbanwee ma chịkwaa ọtụtụ ngwa anaghị akwụ ụgwọ, dịka sava weebụ Apache, PHP , MySQL, DNS, Samba, DHCP, na ndị ọzọ.
Ihe njikwa iwu ma ọ bụ ọnụ bụ ụsụụ ndị agha Switzerland nke onye nchịkwa Linux, mana enwere nhọrọ ndị ọzọ. Otu n'ime ha bụ webmin - ejiri ikikere BSD - nke na-enye ohere nchịkwa nke Linux nke ọma site na ihe nchọgharị anyntanetị ọ bụla.
Ọ bụrụ na ị bụghị onye nchịkwa Linux mana ọ masịrị gị na ijikwa sava weebụ, ozi, nchekwa data, nke a bụ ohere dị mma ịmalite ịghọta ọrụ nke ọrụ nhazi nke sysadmin, site na nkasi obi nke ihe nchọgharị weebụ gị.
Edere Webmin na Perl, nke 5, na-agba ọsọ dị ka sava weebụ ya na usoro ya. Site na ndabara ọ na-agwa site na TCP n'elu ọdụ ụgbọ mmiri 10000, ma nwee ike hazie iji SSL ma ọ bụrụ na arụnyere OpenSSL na modulu ndị ọzọ achọrọ Perl.
E wuru ya site na modulu, nke nwere interface na faịlụ nhazi na sava Webmin. Nke a na - eme ka ịgbakwunye ọrụ ọhụụ dị mfe n’enweghị mbọ ọ bụla. N'ihi nhazi ụdị nke Webmin, ọ ga-ekwe omume onye ọ bụla ide ndọtị maka nhazi desktọọpụ.
Webmin na - enyekwa gị ohere ijikwa ọtụtụ igwe site na ntanetị dị mfe, ma ọ bụ banye na sava webmin ndị ọzọ na otu mpaghara ntanetị ma ọ bụ mpaghara mpaghara.
E nwere nsụgharị ndị ọzọ ọkachamara nke webmin dị ka: Onye ọrụ (ndị na-abụghị mgbọrọgwụ ọrụ), Virtualmin (Virtualhost) na Coludmin (mebere usoro).
Nwere ike ibudata ya ozugbo na ibe na tarbal, RPM ma ọ bụ DEB ma soro wiki webmin maka ntinye.
Ihe mbụ ị ga-eme bụmepee ọnụ ma dezie faịlụ Source.list dị na / wdg / dabara nke ọma ka anyị dee:
Mepee faịlụ tinye usoro ndị a:
ụgwọ http://download.webmin.com/download/repository sarge contributor deb http://webmin.mirror.somersettechsolutions.co.uk/repository sarge አስተዋጽኦ
Ozugbo imesịrị, chekwaa mgbanwe na dọkụmentị ahụ. Mgbe ahụ mMbubata GPG isi na ọnụ na-eso iwu.
sudo apt-key tinye jcameron-key.asc
Mgbe ịmechara usoro ndị a, melite ndepụta nke nchekwa:
N'ikpeazụ, wụnye webmin:
sudo apt-nweta wụnye webmin
Iji jiri Webmin, ị ga-emepe emepe ihe nchọgharị weebụ ị họọrọ ma tinye adreesị na-esonụ: http: // serverip: 10000 /
Ozi ndị ọzọ na: www.webmin.com
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Faịlụ FileLet jiri » Webmin: nchịkwa site na ihe nchọgharị weebụ
Nke ahụ ga-abụ maka na ọ na-eji https iji jikọọ na web, na chrome achọpụta na ọ bụghị asambodo nke ụfọdụ CA.
Enweghị nsogbu maka ya.
M nnọọ arụnyere na-anwale ya na m na laptọọpụ na ọ bụ ihe ijuanya na ego nke ozi na a ngwa na-achụpụ elu banyere usoro onwe ya, site na ihe nchọgharị.
N'ezie, tupu ịbanye, Chromium enyela m ịdọ aka na ntị nche, otu n'ime ndị ahụ dị oke njọ nke na-apụta mgbe ị banyere na saịtị nke obere ntụkwasị obi. Maka ndị ọrụ izizi mara.
Dị ezigbo mma chọta. Banyere.
Zaghachi José GDF
Kedu ka ndị isistes si enyere ya aka
Enweghị m ike ịbanye n'okporo ụzọ / wdg / nke dabara dị ka m mere ma nwaa ma ọ dịghị ihe
Ama m na o zubeghi inye azịza a, mana ọ ka nwere ike ịba uru maka ndị nwere nsogbu a. Ikekwe nsogbu bụ na a ga-emepe faịlụ a na iwu a: sudo gedit /etc/apt/sources.list ka e wee nwee ike itinye akara ahụ. Ihe ọzọ, okwu gedit bụ ederede ederede eji mee ihe atụ a, mana ọ nwere ike ịbụ nano ma ọ bụ ọzọ. N’ikpeazụ, ọ bụghị iwu na ị ga-ede sudo ma ọ bụrụ na ị bụrụla onye superuser.
Ọ dara igosi na faili.list.list nwere ike ọ gaghị anọ n'ụzọ ahụ oge niile, ọ dabere na nkesa, enwere ike ịchọta ya na Source.list.d nchekwa dịka ọmụmaatụ.
Ọ bụ ya…
New artwork ahọrọ maka Debian Wheezy
Linux Mint 13 KDE RC dị